ईपिएस छिन्गु / दक्षिण कोरिया,दक्षिण कोरियामा प्राय फोर्कलिफ्ट नभएको कम्पनी कमै होलान । कम्पनीमा फोर्कलिफ्ट चलाउने नेपालीहरुले पनि सिकेर चलाउने गर्छ्न । लाइसेन्स भएको कमै हुन्छ्न । त्यही पनि चलाउनु पर्ने काम पर्छ । जानी राखेमा काम गर्न सजिलो पर्छ।केही दिन अगाडी फोर्कलिफ्ट दुर्घटनामा एक नेपालीले अल्पायुमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
उक्त घट्नामा चालकको सानो लापरबाहीले गर्दा ज्यान गएको थियो । त्यसैले फ्रकलिफ्ट चलाउदा एकदम धेरै ध्यान दिने गरौ । तलको भिडियोमा दिएको केही कुराहरु मात्र चेक गरियो भने दुर्घटना बाट बच्न सकिन्छ ।
१. कहिले पनि स्पिड नहाकौ र चाहिने भन्दा बडि लोड नबोकौ , चालकले नदेख्ने गरी झन बोक्नै हुन्न ।
२. आफुलाई राम्रो सङ चलाउन आउदैन भने भिड भाडमा कहिले नचलाउ ।
३. सिट बेल्ट अनिवार्य लगाउने गरौ । केहि गरि सिट बेल्ट पनि छैन र फ्रक्लिफ्ट लड्न लाग्यो भने उल्टो पट्टी बाट भाग्ने गरौ । जता लड्न लाग्यो त्यतै बाट निस्केर भाग्न खोजियो भने ज्याननै जान सक्छ थिचेर । त्यस्तो काम नगरौ ।
४. सामान उचालेको बेला वा लोडर भए बाकजी माथी उचालेको बेला कहिले त्यस्को तल हुने , बसेर कुनै काम नगरौ । अस्तिको घट्नामा ह्यईड्रुलिक लिक हुदा बाकजी उचालेर बनाउने क्रममा थिचेर मृत्यु भएको रहेछ ।
५. फ्रकलिफ्टमा चड्न भन्दा अगाडी कुनै खरावी छ कि छैन चेक गर्ने गरौ । जस्तै ब्रेक , पार्किङ , लाइट , हर्न , हाईड्रोलिक पाइप फुटेर लिक भएको छ कि छैन , टाएर , उचाल्ने काट्टा आदि ।
कति नेपाली साथीहरु फ्रकलिफ्ट धेरैनै छिटो कुदाउने गर्नु हुन्छ अलि होसियार हुनुहोला । पहिला मनै काम गर्ने कम्पनीमा कोरियनहरुले गुनासोनै गरेको थियो नेपालीले धेरै छिटो कुदायो भनेर । अन्य गाडी जस्तो हुन्न फ्रकलिफ्ट । यसको बनावट अन्य गाडी भन्दा फरक हुने भएकोले पल्टने सम्भावना बदि हुन्छ बेलामै ध्यान दिने गरौ । दुर्घटना हुन बाट बचौ र बचाउ ।
कोरियामा छिगेछा चलाउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु !